Honduras: Horohoron-tany mahery nanetsiketsika ny firenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2009 8:11 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Português, Français, Español, Italiano, Nederlands, македонски, বাংলা, English
Nifoha aloha be tokoa i Honduras ny marainan'ny 28 Mey noho ny horohorontany mirefy ‘7.1 tamin'ny maridrefy Richter’ nanetsiketsika ny firenena. 130 kilometatra tany avaratry ny tanànan'i La Ceiba ny foibeny, tany amin'ny morontsiraky ny ranomasim-be Atlantika. Tamin'ny 2:24 maraina, ora tany an-toerana, nanery ireo mponina hivoaka ny tranony tanatin'ny haizina ny horohorontany mba ho hitady toerana azo antoka. Dimy no voamarina fa maty , maro ny naratra, ary hita miandalana ireo fahasimban'ny foto-drafitrasa eto amin'ny firenena toy ny trano maro, tetezana ary làlana.
Ireo ‘Microblogging platforms’ toy ny Blipea sy Twitter no voalohany nitatitra ny horohorontany avy amin'ny mpampiasa azy ireo any San Pedro Sula, Tegucigalpa ary La Ceiba. Maro no nitatitra ny zava-misy manodidina azy ireo amin'ny fampiasàna ny teny fototra #temblorHN (horohorontanyHN).
Manoratra i Yamil Gonzalez @yamilg :
Nanoratra i Roberto @roberto :
Nanoratra Jagbolanos @jagbolanos :
Nanome fanampim-baovao koa izy nandritra ny tontolo andro ka anisan'izany ny firodanan'ny Tetezan'ny Demokrasia, iray amin'ireo tetezana lehibe any an-toerana [es].
Tara i La Gringa's Blogicito tamin'ny fitaterana ireo heviny noho ny tsy fahampian'ny herinaratra, nefa nanoratra izy tao aoriana fa ity no horohorontany voalohany niainany hatramin'izay nonenany tany Honduras.
Born in Honduras (Teraka tao Honduras) sy ny dikanteny amin'ny espanola-ny Nacer en Honduras [es] dia nanome rohy mankany amin'ny gazety any an-toerana. Ho fanampin'izany, Interartix [es] dia nizara sarin-tanin'ny foiben'ny horohorontany sy ny fampandrenesana tsunami izay nampitaina, saingy notsoahina taty aoriana.